Etu esi eme freshener ikuku siri ike iji na -esi isi ụlọ | Bezzia
Otu esi eme freshener ikuku siri ike iji na -esi isi ụlọ
Nke Torres | 09/10/2021 16:00 | Mee ya n'onwe gị, Home
Ịmepụta freshener ikuku siri ike iji na -esi ísì ụlọ dị ngwa ngwa ma dịkwa mfe karịa ka ọ nwere ike iyi. Ka ọ were ị nwere ike iji isi na -amasị gị na -esi ísì ụlọ gị, na -enweghị mkpa iji ngwaahịa kemịkalụ na anaghị asọpụrụ gburugburu. Inwe ísì ọma n'ụlọ dị mkpa iji nwee ike ịnụ ụtọ ịdị mma nke ụlọ dị ọcha ma dịkwa mma.
Iji mezuo nke a, enwere ọtụtụ aghụghọ arụrụ n'ụlọ, dị ka ịnwe ifuru ọhụrụ, fresheners ikuku eke maka ime ụlọ ọ bụla, akpa akwa nwere ifuru kpọrọ nkụ maka kabinet, n'etiti ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ. Dị ka echiche a iji mepụta freshener ikuku siri ike nke ị nwere ike iji ha abụọ na -esi isi ụlọ, dị ka drawer ma ọ bụ n'ime kabinet. N'ihi na ọ dịghị ihe na -atọ ụtọ karịa uwe dị oke ọnụ ahịa mana ọ na -esi isi.
1 Freshener ikuku siri ike, kedu ka esi eme ya?
1.1 Site na wax wax
1.2 Otu esi eme jelii ikuku freshener siri ike
Freshener ikuku siri ike, kedu ka esi eme ya?
Freshener ikuku siri ike abụghị naanị ụdị ncha ochie merela, naanị kama iji ya saa akwa, a na-eji ya dozie ụlọ ahụ ma ọ bụ kabinet. Iji mepụta ncha ndị a na -esi isi ma ọ bụ freshener ikuku siri ike, ị ga -achọ wax wax iji mepụta ihe siri ike. Ọ bụ ezie na enwere nhọrọ ọzọ dị mfe, ngwa ngwa na ọnụ ala karịa, gelatin. N'ebe a anyị na -egosi gị otu esi eme freshener ikuku siri ike n'ụzọ abụọ a, yabụ ị nwere ike ịnwale wee mepụta ihe okike gị nke ị ga -eji na -ete ụlọ gị mmanụ.
Site na wax wax
Iji mepụta freshener ikuku siri ike nke ụlọ, ị ga -achọ iji soy wax, ya bụ, ọ bụ ngwaahịa na mgbakwunye ịbụ nke ejiri aka mee, ọ bụ vegan. Banyere ihe eji eme ihe na -esi ísì ụtọ, ị nwere ike họrọ mmanụ dị mkpa nke ọ bụrụ na ego a ga -eji mee ihe ga -abụ 5% nke ego maka wax. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji mmanụ ahịhịa, pasent ahụ ga -abụ 10% n'ihe gbasara wax waksị ihe eji eme ihe. Ndị a bụ ihe ị ga -achọ mepụta freshener ikuku siri ike nke a na-eme n'ụlọ.
100 gr nke waksị soy
mkpa mmanụ ma ọ bụ botanical nke nhọrọ gị
ebu nke sylicon
Usoro a dị nfe ma ọ gaghị ewe gị ihe karịrị nkeji iri atọ. Isi ihe dị na ya bụ iji gbazee wax soy, usoro nke a ga -eme n'obere ọkụ. Mgbe a na -agbaze waks kpamkpam, anyị na -agbakwunye ego dị mkpa nke isi na -esi ísì ụtọ. Cheta, ọ bụrụ na ị na -eji mmanụ dị mkpa ị ga -etinyerịrị 5% ma ọ bụrụ na ọ bụ mmanụ botanical ga -abụ 10% ma e jiri ya tụnyere 100gr nke waị.
Nwuo na ngaji osisi ma gwakọta ihe ndị mejupụtara ya nke ọma. Na -esote, wụsa ngwakọta n'ime ebu silicone. Ọ dị mkpa na ejiri ihe a mee ha ka ewepu mbadamba ikuku freshener n'ụzọ dị mfe na ebu. Ọ bụrụ na ịchọrọ icho mma freshener ikuku gị siri ike, naanị ị ga -agbakwunye akwụkwọ potpourri ole na ole, akwụkwọ akpọnwụwo, osisi pawuda ma ọ bụ peel citrus. Ka ngwakọta dị jụụ ma sie ike kpamkpam Tupu ịpịgharịa na voila, ị nweela fresheners ikuku siri ike iji mee ụlọ gị.
Otu esi eme jelii ikuku freshener siri ike
Nhọrọ nke ọzọ a dị nfe dịka nke gara aga na usoro ndị ahụ yitụrụ. Ihe dị iche bụ na ihe eji eme ihe iji nweta ihe siri ike bụ gelatin. Usoro bụ ihe a, mbụ anyị ga -esi otu iko mmiri sie, na envelopu nke gelatin na -anọpụ iche na nnu nnu anọ. Mgbe ngwakọta na -esi esi, wepụ ya na ọkụ wee tinye iko mmiri oyi.
N'oge a anyị ga -agbakwunye mmanụ a họọrọ, anyị ga -achọ ihe dị ka 10 ma ọ bụ 15 tụlee mmanụ dị mkpa. Ka freshener ikuku siri ike nweekwa ọmarịcha agba, anyị ga -agbakwunye ole na ole ụcha nri. Wunye ngwakọta ahụ n'ime arịa iko, dị ka ite yogọt, obere ite, ma ọ bụ ite iko ọ bụla ị nwere n'ụlọ. Ozugbo ngwakọta ahụ jụrụ oyi, gelatin ga -esi ike ị ga -enwe freshener ikuku dị mma maka idobe n'ime ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ n'obere akụkụ ụlọ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Otu esi eme freshener ikuku siri ike iji na -esi isi ụlọ
Mmega ụkwụ 4 ime n'ụlọ
Uru dị ukwuu n'iji unere